Momba ny Fanoratana Bilaogy Any Amin’ny Faritra Misy Fifandirana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2018 5:54 GMT
Indray andro, nilaza i Ethan Zuckerman, iray amin'ireo mpamorona ny Global Voices, tao anaty tafatafa iray, fa mila fitserana vao afaka mikarakara toerana lavitra iray izay tsy dia tena mahasarika loatra ny jerin'ny haino aman-jery. Mety avy amin'ny fananana namana akaiky teraka tany, na tamin'ny alalan'ny fitsidihana nataonao tany izany fitserana ho ana ftoerana iray izany. Indraindray, mety ho avy amina soratra manindrona, ampy fanazavàna izay mitondra anao ho any amin'ny toerana iray hafa fotsiny ihany izany.
Indraindray, tsy raharahian'ireo haino aman-jery mahazatra sy ireo fiarahamonina blaogera noho ny antony mitovy ireny toerana ireny. Tena sarotra rakofana, tsy vitan'ny hoe noho ny tsy fahampiana lojistika amin'ny resaka herinaratra sy koriana aterineto malalaka fotsiny ihany, fa satria sarotra ihany koa ny mandika tsara ireny zavatra iainana ireny ho an'ny mpamaky antonony izay ny zavatra iainany andavanandro dia, amin'ny fomba maro samihafa, tsy manan-tsahala.
Mba toerana koa anie izany Tanànan'i Gulu izany eh. Gulu no vavahady mankany amin'ny avaratra midadasika ao Oganda izay tena nijaly tanteraka noho ireo faritra hafa manerana izao tontolo izao. Fijaliana lehibe sy isan-karazany izany. Nandritra ireo roapolo taona lasa, olona mihoatra ny iray tapitrisa ao avaratra no miaina ao anatin'ny toby natokana ho an'ny Olona Nafindra Monina ao anatin'ny taniny ihany (IDP), matahotra ny fanafihana mety hataon'ny Lord's Resistance Army (LRA) sy ny herisetra asehon'ny fanjakana isanandro. Miady biby fiompy ireo mpiady ao amin'ny faritra tena mikorontana indrindra ao avaratra atsinanan'i Karamoja, amin'ny fampiasana AK-47, ary matahotra daroka baomba an'habakabaka mety hataon'ny fanjakana. Tany amin'ny taona 1930, hita tao amin'ny faritra ny Tsimokaretina Nile Tandrefana ary, tany amin'ny taona 1970, niainany ny valanaretina Ebola.
Kanefa ny Tanànan'i Gulu tenany mihitsy no toa mangina hafahafa sy mambabo fo. Tanàna tena voalamina tsara izy io , manaraka ny maritrano Britanika; tony ary mahafinaritra kokoa raha oharina amin'i Kampala izy. Maro ireo olona toa mahery sy mpihevitra ny zava-drehetra ho tsara ary toa samy tia manao soa sy malala-tanana daholo ny olona. Nijanona tsy ela akory izay ireo fanafihan'ny LRA, ary misy fanantenana kely; angamba izay no farany azontsika angatahina taorian'ireo androm-piainana nisian'ny habibiana tsy ankijanona. Ho an'ireo naheno mikasika ny zavadoza tany amin'ny faritra avaratr'i Ogandà, misy tsy fifanoheran-kevitra hafahafa rehefa avy mitsidika ilay toerana. Na eo aza ireo fahasahiranana tsy hay lazaina atrehany eo amin'ny fiainana, mamela antsika hanantena ihany matetika fa olona ireo mpanao ratsy ireo, na dia tsy maneho ny mahaolona mihitsy aza ny fihetsiny.
Efa henontsika ireo fanehoankevitra politika maro mikasika ny fifampiraharahana hikatsahana Fandriampahalemana atao ao Juba nisy teo amin'ny LRA sy ny Fanjakan'i Oganda. Kanefa tsy dia rentsika firy mikasika ny fomba fiainan'ireo olona izay voakasiky ny fifandonana mitsingerina nisy tao avaratra hatramin'ny nahazoana fahaleovantena. Hafahafa izany, satria misy hanihany mandeha ao avaratra ao mikasika ny fomba fieritreretana fa hoe ireo vahoaka ao dia mpandray anjara mpanampy ho an'ireo vahiny mpamokatra sarimihetsika izay maka an-dahatsary ny loza ataon'ny olombelona. Raha toa ka misy ireo lahatsary fanadihadiana vitsivitsy momba izany lohahevitra izany, tena vitsy kosa ireo votoaty an-tambajotra mikasika izany.
Sambatra isika tamin'ity herinandro ity tamin'ny fananana lahatsoratra blaogy mikasika ny fiainana any avaratra. Manantena aho fa mpanoratra maro no hivoaka avy ao amin'ny avaratra midadasik'i Ogandà ary ho betsaka kokoa ireo blaogera monina ao Kampala no hankany avaratra ary hirakitra ny zavatra niainany.
Afaka jerena ao anatina zavatra iainana tsotra isanandro ny tsy fitovian'ny fiainana ao Ogandà avaratra. Ao amin'ny Niala tao Kopenhaga ho any Ogandà aho, nandeha tany avaratra i Pernille ary manontany hoe Aiza Ny Efitrano Fandroana ao amin'ny Toby IDP?
Rehefa mipetraka any amin'ny tobina IDP ianao, ao amin'ny toerana kely, tsy misy vola sy tsy misy fahafahana hanana fitaovana – mila mahay mamorona ianao. Tena mahatalanjona ny zavatra afaka averina ampiasaina sy ampiasaina ho an'ny zavatra hafa. Fa tadidio fa natao noho ireo antony ery ambony daholo ny ankamaroan'izany.
Fandroana iray vita avy amin'ny zerikàna efa nosokafana ilay sary ao anatin'ny rohy voalohany etsy ambony. ‘fanasana tanana’ kosa ilay sary ao anatin'ny rohy faharoa, izay hanosehanao ny hazo ao ambaniny miaraka amin'ny tongotrao mba tsy hikitihanao ilay zerikàna kely miaraka amin'ny tànana maloto izay avy any an-davaka fivoahana. Tena zavatra alaina am-pahamatorana ny fanasana tanana ety, izany hoe, noho ny kolera.
Ao anatina lahatsoratra iray hafa, mandeha mankany Arua i Pernille, ilay tanàna an-tsisintany avaratra iraisana amin'i Sodana. Manoratra izy:
Ao Arua, ny fandriampahalemana dia marika, ary satria nanintona ny saiko tamin'iny andro iray iny ny mpamaky iray, ankehitriny fiteny manokana ny hoe ‘resaka fandriampahalemana’ mba hiresahana mikasika ny tsy mitovy fananahana amin'ny tena. Mino aho fa marika tsara.
Misy ireo poeta afaka mamoaka ny feon'ireo mijaly. Amin'ny fanoratana ao amin'ny Tononkalo avy amin'ny ady an-trano, asehon'i Chorya antsika hoe hatraiza ireo olona monina ao avaratra no lasa leo sy reraka,
Ampy izay. Tohano ny fanapahankevitra amin'ity andro ity -
ary ndeha isika hankany amina
fandriampahalemana tony sady maharitra
toy ito lanitra manjombona ambonintsika ito.
Ahilio ho any ambany tsihy ny fahafahambaraka;
raiketo an-tsangambato ny fandringanana, raha toa ka voatery ianao,
mandra-panafihan'ny henatra azy hiala.
Ary ny soritry ny làlany, naseho,
hita ireo tsiambaratelo vaovao sy raikipohim-paharetana, natsika avy amin'ny rà feno herisetra.
Fotoana izao hisian'ny fandriampahalemana sy ny fifangaroana…